Adduunyadu Waa Besteed! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Haddaan idhi Boqorkayow
Waxaan idhi Boqorkayow
Allow barashaan ogeyn
Intay tahay baaxaddaa
Qofkuna badow buu ka yahay
Inuu kugu soo ban-dhigo
Bayaannada aan fogeyn.
Bishmaan u daraandarayn
Inuu boqolkaaga magac
Intuu Bisinkaagu yahay
Ka sheego wax aan badnayn.
Waxaad tahay gun iyo baar
Ballaadh iyo deeq mug weyn
Waxaad tahay beer janna ah
Waxaad tahay baarri faxan,
Intaad bixisaa raxmada
Intaad burisaa raja ah
Intaad hanataa ka badan
Baxaalliga hawl adduun
Wax-beelka intaan hurayn
Bushaaro hayaad u tahay.
Waxaad tahay baahi-laawe
Waxaad tahay baahidayda.
Qof waayey ma baadi-doonin.
Qofkii u bal-reebiwaayey
Ma xeerin badbaadadiisa.
Xuduudka baddaada caaggan
Qof tiigsadey baylah weeye.
Sharkaaga badheedhka dhiirran
Baqaa lagu aaminaa,
Burjina Adigaa ku sugan
Awoodaha baaca dheer.
Adduunyadu waa berdaan
Run baa la-bog-dooxayaa
Higsiga baradeeda nool
Waxaa lagu beegsadaa
Boqoolkuna waa jiraa,
Naftana ballankii ka yiil
Haddaan lala beretansiin
Waxaa lagu beegmayaa
Bayuuraha aan hambayn.
Hadday tahay beri-samaad
Ta baasina way ag taal
Haddaan laga baydhsanaan.
Waxaa jira beenawaas,
Bahdiisuna waa yiciis.
Wedkay balag saarayaan,
Dharaaraha baane jiro,
Bariisana way dhacdaa,
Haddaan laga sii bed-qabin
Beentaadu runtay necbayd.
Barwaaqo markay hayaan
Hadday isa sii bidaan
Baxdowga markay yihiin
Hadday isu sii bogaan
Addoomuhu ways bulaan.
Waxay cadho biirsadaan
Waxaa lagu sii badaa
Xanuun iyo boogo kale.
Hadday isa sii baraan
Inay berri sii cunaan
Banbaaniyo xaaja guud
Haddii baga loo cuskado
Qof iyo wada-buul-dhis tahay
Yiqiintuna bowsi tahay
Nin iyo keli loo bokhrado
Hiyigu kala-baadsan yahay
Bartii qof yaqaan hungow
Bil-khayrtuna way fog tahay.
Markay naftu baadi tahay
Haddaan bahal Kuu sanqadhin
Cabsida bixisaa ka weyn.
Hadduu qofku been dugsado
Baqaa lagu xeerayaa
Bahduu ka curyaamayaa
Wax baydadiyaa eryada
Cishaba babbisaa hor taal,
Waxaa ku bannaan runtii
Waxay u ahayd ku beel
Dhankeedana bayr ka qaad
Inay tahay baahi, diid
Haddana yidhi baadi doon
Halkeeda wax buuxin kara.
Berruu ka saluug qabaa
Bursuu ku xujoobayaa,
Duruus u habee baryada
Beybeysiga hawl ka dhigey
Bishmaa ka calaacalsii
Sengii faney Booddo-waal,
Xumaanta u beer-nuglaa
Bahaynta ku caado goo
Shan baabbaco hoo ku qaad
Idaa gudhay loo baqee
Xanjiyo xabag loo bad-badi
Haddana balawaas ka qaad
Busaaradi waa halkii
Hungaa baradiisa taal.
Cishaba filan-waa ku baah
Cishaba garan-waa ku biir
Saqaa dhexe baaq u yeedh
Canaan ka bariisan waa.
Belaayo waxay tustaa
Markuu isa sii barkado
Inuu weli sii baxsado.
Baraad-la’ usii galgaley
Qallooc isu sii barbari
Bidaartana sii arradi
Wanaagga ka baali noqoy
Intii bilan sii illow
Buddiisana sii gorgori
Waxyeellada sii bogbogey
Adduunyada baylah mood
Runteedana boob ku waa
Dhabteeda bannaysan waa
Dhibteedana baajin waa
Badhaadhena ciil ku waa
Walaacana baan ka waa
Badbaadana meel u waa.
Naftana biya-dhiijin waa
Dharaarna is-baadhi waa
Kashana boholyow ka waa,
Badheedh lagu sii hubsado
Hiyiga barakaysan waa
Hankana ku barooran waa,
Haddaan baqe fuushanayn
Inuu yahay buur ku diid
Dareennada boorta neceb,
Badroolka inuu ku sugo.
Bisaylka hadduu qof diido
Biraynta ku faani waayo
Bakhtuu uga sii socdaaye
Hadduu qofku baydda goosto
Ku baayaco geeridiisa
Baraar adhi baa taqaan.
Haddaad u buseeli weydo
Bogsiinta ka raadi maaha
Wixii lagu sii bukoodo,
Xumaantuna waa basari
Bidhaantuna maaha ruux
Haddaanay lahayn burhaan
Badh kaa maqan baad la’dahay
Basaastuna waa qalbiga
Intaas ha ka dhaafin baal.
Waxaa isu soo bulladay
Dadkuna budulkooda raac
Siyaasina beel ku dhoof
Dantiisa ku baadi doon
Ku baaji xilkay lahayd
Sidii goray baar-caddee
Ballaadhsiga diin ka dhigey
Baxnaanada sii adkee
Hilaadaha sii burburi
Bawaarkana sii ulee
Bilaale ka qaad yaraa
Cishaba huri duur belbela
Billaawaha sii casee
Billaahida sii xasee
Buskeeda ku sii xabaal
Biliiliqo sii dhudhumi
Baruurana sii fantee
Awaalaha sii basaas
Sidii buro soo noq-noqoy.
Markay barar fuuqsadaan
Sidii Dibi bey madow
Hadday u banaaxiyaan
Badhyaa-cune jeer hungow
Xaqiiqada boodh ku laac.
Nin biima ah baa khatalay
Hub iyo buntukh loo shushubi
Sidii bulay loogu hees
Intii ba’an laysu dhiib
Dalaal lagu beer-caddaa
Qof iyo baradiis is cune
Bariidada lays la waa.
Wuxuu Boqorkeedu yidhi;
Wixii Bido meel u yaal
ILaah bixiyaa ka dhow
Bushaarana way jirtaa.
Hadday falaw baaban tahay
Hadday bili doorsan tahay
Baftiyo qurux baa u taal,
Hadday tahay biir aja ah
Caway ku ballaysan tahay,
Bar-laawe hadduu didsaday
Barbaar gudan baa u nool,
Hadduu Baqal-fuul gurguray
Baroor faras baa hidda ah,
Hadduu Badhax-miis ku dhalay
Runtaan la-biyeyn karayn,
Nin baydhsadayow dan guud
Waxaa jira baadi-doon,
Af booli wixii ku maqan
Col soo bedayaa ogsoon,
Badraanno hadday jiraan
Barqaa lagu waayayaa,
Hadday wada baar-qab tahay
Wixii dhacay geed Berda ah
Fircoonnada baaxad dumey
Beryii tegey baa hubsaday,
Dhufaanna bir waa yaqaan.
Hadday wada B.M tahay
Buruud kiciyaa dul yaal,
Waxay bohol jiidhayaan
Libaax bulbullaa ku jira
In baal sidataa dahsoon
In baabbacalaa digtoon
Dhashii Beder baa xidhxidhan
Biddena camalkiis u daa.
Tags: Adduunyadu Waa Besteed!
Next post Dhul Gariir!
Previous post Maxaad Ka Taqanaa Shimbirka La Yiraahdo Gorgor?